विश्वकै पहिलो उड्ने ट्याक्सीको सफल परीक्षण ! - Nepal Post Daily
विश्वकै पहिलो उड्ने ट्याक्सीको सफल परीक्षण !
बीबीसी – जर्मनको एउटा स्टार्ट–अप कम्पनीले विश्वकै पहिलो आफैँ उड्ने पाँच सिटयुक्त ट्याक्सी सार्वजनिक गरेको छ । लिलियम कम्पनीले अघिल्लो महिनामा मात्र यसको नमुना परीक्षण गरेको थियो जुन आफैँ माथि उडेर अवतरण गर्न सफल रहेको थियो ।
तर यसको सेवा शुल्क कति लाग्नेछ भन्नेबारे स्पष्ट जानकारी नदिएपनि कम्पनीले साधारण ट्याक्सी समान शुल्क लिइने दाबी गरेको हो । कम्पनीका व्यवसायिक अधिकारी रेमो गर्बरले सिएनएनसँग बोल्दै भने, “हाम्रो उद्देश्य साधारण मानिसहरुलाई पनि यसको पहुँच दिलाउनु हो र ठुल्ठुला धनी व्यवसायी यात्रीहरुलाई मात्र नभएर जोसुकैले पनि यसको सेवा लिन पाऊन् भन्ने हाम्रो चाहाना रहेको छ ।”
Previous articleप्रहरी खोजीमा रहेकालाई समात्न विमानस्थलमा ‘फाइन्ड डिभाइस’, दुई लाखको विवरण सुरक्षित
Next articleगिरिशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न राजपाको माग